Afti maanta ka dhaceysa dalka Burundi | Hangool News
Afti maanta ka dhaceysa dalka Burundi
May 17, 2018 - Written by Hangool News 1
Madaxweyne Pierre Nkurunziza iyo xisbigiisa haya talada dalkaasi ayaa usoo durbaan tumayay sidii ay taageero ugu heli lahaayeen aftida loo qaadayo dastuurka ee uu muranka badan ka taagan yahay.
Go’aankiisii ahaa inuu xilka u tartamo iyo guushii 2015-kii ayaa waxa ay horseedday inay dalka Burundi ka dhacaan dibadbaxyo, iskuday afgambi iyo qulqulatooyin ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 700 oo qof halka in ka badan 400,000 oo qofna ay dalka isaga qaxeen.
Hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegaytay in dadka ka soo horjeeda aftida la cabsigeliyay, la xiray sidoo kalana la garaacay.
Todobaadkii la soo dhaafay 26 qof ayaa lagu dilay weerrar ka dhacay tuulo ku taal Galbeedka Burundi, oo waxaa dilka gaystay baa la leeyahay dad loo maleeyay inay doonayaan inay carqabaladeeyaan aftida.
Codbixinta Khamiista ayaa waxa ay dheelitir u tahay heshiiskii 2005-tii kaas oo soo afjaray dagaalkii ba’naa ee sokeeye ee dalkaasi ka socday.